IDiploma - Isazi se-BIM MEP - Geofumadas
IDiploma - Isazi se-BIM MEP
NgoJanuwari, 2021 Amadiploma e-AulaGEO
Le khosi ihloselwe abasebenzisi abanentshisekelo emkhakheni we-electronicschanical design, abafuna ukufunda amathuluzi nezindlela ngendlela ebanzi. Kanjalo nakulabo abafisa ukugcwalisa ulwazi lwabo, ngoba bayazi kahle isoftware futhi bafisa ukufunda ukuhlela ukwakheka kwemijikelezo ehlukene yokuklama, ukuhlaziywa nokuhlelwa kwemiphumela kwezinye izigaba zenqubo.
Yakha amakhono wokuqamba, ukuhlaziya, nokuxhumanisa izinhlelo zamapayipi, ezikagesi, ne-electromechanical (HVAC). Lezi zifundo zifaka ukufundwa kweRevit, isoftware esetshenziswa kakhulu emkhakheni wezingqalasizinda zeBIM; kanye nokusetshenziswa kwamathuluzi ulwazi olusebenzisana ngawo kwezinye izigaba zenqubo efana ne-NavisWorks. Ngokwengeziwe, kufaka phakathi imojula yomqondo yokuqonda wonke umjikelezo wokuphathwa kwengqalasizinda ngaphansi kwendlela ye-BIM.
Izifundo zingathathwa ngokuzimela, ukuthola idiploma yesifundo ngasinye kepha «Idiploma Yesazi seBIM MEP»Ikhishwa kuphela lapho umsebenzisi ethathe zonke izifundo ohambweni.
Revit MEP Course - Ukufaka Amapayipi
Ukwakhiwa kwamamodeli we-BIM wokufakwa kwamapayipi Okuzokufunda Sebenza ngokubambisana kumaphrojekthi wezindlela eziningi ezibandakanya ...
Le nkambo ye-AulaGEO ifundisa ukusetshenziswa kweRevit ukumodela, ukuklama nokubala amasistimu kagesi. Uzofunda ...
Thumela Previous«Langaphambilini Inkambo ye-BIM 4D - usebenzisa i-Navisworks
Post Next Revit MEP Course - Ukufaka i-HVAC MechanicalOkulandelayo »
Funda i-GIS usebenzisa zombili lezi zinhlelo, ngemodeli yedatha efanayo Isexwayiso Inkambo ye-QGIS idalwe ngeSpanishi, ...